ShweMinThar: HR တစ်ယောက်မှာ ရှိရမယ့်အရည်အချင်းကဘာတွေလဲ?
(မဖတ်ဘဲ share မသွားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ!)
HR လုပ်မယ့်သူတော်တော်များများနဲ့ ခေတ်သစ်စီမံခန့်ခွဲသူတော်တော်များများသိချင်နေကြတဲ့ အဖြေလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။
အမေရိကန်အလုပ်သမားဦးစီးဌာနအနေနဲ့ အမေရိကန်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို သုတေသနတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲသုတေသနရဲ့ရလဒ်အနေနဲ့ HR တွေမှာရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကိုသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ HR တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ဗဟုသုတ Knowledge တွေကတော့
1. Personal and human resources
၀န်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့အဓိကအခြေခံမူဘောင်တွေဖြစ်တဲ့ ၀န်ထမ်းရှာတာ၊ ရွေးတာ၊ သင်တန်းပေးတာ၊ လစာနဲ့ခံစားခွင့်တွေတွက်ချက်စီမံပေးတာ၊ အလုပ်သမားရေးရာ ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေမှုတွေလုပ်ပေးတာ၊ ၀န်ထမ်းရေးရာအချက်အလက်တွေကို စီမံပေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
HR တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဖြစ်တဲ့ ရုံးစာရေးနည်း၊ ဖိုင်တွဲနည်း၊ ဖောင်ပုံစံတွေဖန်တီးနည်းတွေကိုနားလည်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
(ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်အနေနဲ့တော့ အစိုးရအရာရှိဘက်ကနေထွက်လာတဲ့ HR, Admin တွေကလွဲရင် တကယ့်ကို အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ HR အတော်များများကိုယ်တိုင် ဒီနေရာမှာအားနည်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ HR သင်တန်းတွေအနေနဲ့လည်း ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။)
HR လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပဲနားလည်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုပညာကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ စီမံခန့်ခွဲဆိုင်ရာ မူဘောင်များကိုနားလည်ခြင်းတို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်း ပြတ်ထောက်ရင် ခေါင်းဆောင်မှုပညာကိုနားလည်တဲ့ အကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။ ခေါင်းဆောင်မှုပညာကို နားလည်အသုံးချတဲ့ HR နဲ့ နားမလည်အသုံးမချတဲ့ HR ကြားမှာ ကွာခြားချက်ကတော့ HR လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်တာချင်းအတူတူ ၀န်ထမ်းတွေအပေါ်၊ Line Manager တွေအပေါ်၊ အကြီးပိုင်းစီမံခန့်ခွဲသူတွေအပေါ် သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း မတူညီကြပါဘူး။ တချို့HR တွေရဲ့စကားဆိုဝန်ထမ်းတွေ၊ မန်နေဂျာတွေ၊ ပိုင်ရှင်တွေက ရှိတယ်လို့တောင်မထင်ဘဲ တချို့ HR တွေအပေါ်ကြသြဇာရှိနေတာတွေက Leadership ရဲ့သဘောသဘာဝပါပဲ။
Service ပေးတော့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ကိုသူ အစေခံတစ်ယောက်လို သဘောထားပြီး သူ service ပေးရမယ့်သူကို အရှင်သခင်လိုသဘောထားရမယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ (တစ်ခါတည်းကြုံလို့ပြောရရင်တော့ အစိုးရ၀န်ထမ်းကို Government Servant လို့ခေါ်မလား Civil Servant/ Public Servant လို့ခေါ်မလားဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ Government ဆိုတဲ့အစိုးရအတွက် အစေခံတစ်ယောက်လိုပြုမူမယ့် Government Servant လား။ ပြည်သူတွေအတွက် အစေခံတစ်ယောက်လိုပြုမူမယ့် Public Servant လားပေါ့။)
အမေရိကန်အလုပ်သမားဦးစီးဌာနရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ HR တစ်ယောက်အတွက် ဒီလိုဗဟုသုတမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားသလို HR တစ်ယောက်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု (Skills) နဲ့ ပိုင်နိုင်မှု (Abilities) တွေကိုဒီလိုဖော်ပြထားပါသေးတယ်။
ဒီကိစ္စအတော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ။ Communication ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်သူတိုင်းမှာရှိတဲ့ နားထောင်တတ်တဲ့အလေ့အကျင့်၊ ကျွမ်းကျင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်သားပြောတဲ့စကားအပေါ်သေချာနားလည်အောင် နားထောင်ပြီး ထုတ်ပေးသင့်တဲ့ အဖြေကိုထုတ်ပေး၊ မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းကိုပြန်မေးတဲ့အရည်အချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ကြုံတုန်း ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ စာဖတ်သူတို့လည်းအသိပဲ HR အတော်များများနားထောင်တတ်တဲ့အလေ့အကျင့်ကသိပ်မရှိတာတွေ့ရတယ်။)
သူပေးချင်တဲ့ message ကို တစ်ဖက်သားနားလည်အောင် သေသေချာချာ မပေးတတ်တဲ့၊ မပြောပြတတ်တဲ့ HR တွေအများကြီးကို ကျွန်တော်အတော်များများကြုံဖူးပါတယ်။ HR တစ်ယောက်အနေနဲ့ မရှိမဖြစ်တတ်ရမယ့်အရည်အချင်ဖြစ်လို့ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ လေ့ကျင့်ယူသင့်ပါတယ်။ စကားပြောနည်းနဲ့ပတ်သက်ရင် သင်တန်းတွေ၊ စာအုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါပြီ။ လက်တွေ့အသုံးချလေ့ကျင့်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကြိုးစားလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။)
လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ ရုံးစာအရေးအသားတွေကို နားလည်တဲ့ အထိဖတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာမှာတောင် နားလည်အောင် အတော်ခက်ခက်ခဲခဲဖတ်ရတဲ့စာတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ HR တွေအတွက် အတော့်ကိုအရေးကြီးတဲ့ အလုပ်သမားဥပဒေတွေကို နားလည်အောင် ဖတ်ရတဲ့အခြေအနေမှာ HR တိုင်းနားလည်အောင်မဖတ်တတ်သေးတာတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့စာဖတ်အားကောင်းလာတဲ့အခါ ဒီကျွမ်းကျင်မှုကအလိုလိုရလာပါလိမ့်မယ်။
ပြသနာတစ်ခုခု၊ အခြေအနေတစ်ခုခုအတွက် အဖြေရှာရတဲ့အခါမှာ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မျိုး မဟုတ်ရင် ဖောက်ထွက်တွေးခေါ်တတ်တဲ့အရည်အချင်းဟာ မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ယျထာဘူထကျကျဆင်ခြင်တွေးခေါ်တတ်တဲ့၊ ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်သတ်မှတ်တတ်တဲ့အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းက မွေးရာပါပင်ကိုဗီဇနဲ့ အနည်းငယ်ဆိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုအတွေးအခေါ်မျိုးကိုလည်း လေ့ကျင့်ယူလို့ရပါသေးတယ်။ problem solving နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုခဏခဏကြုံလာတဲ့အခါ၊ problem solving နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်စာပေတွေ၊ သင်တန်းတွေကိုတက်ပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးလာတဲ့အခါ အဆင်ပြေလာတာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်သားရဲ့စကားလုံးအသွားအလာအပေါ်မူတည်ပြီး ဘာတွေတွေးပြီး၊ ဘာတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းတတ်တဲ့အရည်အသွေးလို့ပြောရမလိုပါပဲ။ စာဖတ်သူတွေလည်းအသိပါပဲ။ HR တစ်ယောက်အနေနဲ့ လူကဲခတ်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့မျက်နာအမူအရာတွေအပေါ်ကြည့်ပြီးလူကဲခတ်ကြသလို အပြောအဆိုတွေအပေါ်မှာကြည့်ပြီးလည်း လူကဲခတ်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ အဲ (၂) ခုလုံးကိုတော့ ၀န်ထမ်းခန့်တော့မယ် interview တွေမှာ HR တွေအသုံးချလေ့ရှိကြပါတယ်။
အခုဒီနေရာထိရောက်အောင်ဖတ်လာခဲ့တဲ့အတွက် စာဖတ်သူဟာ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းရှိပြီးသားသူ ဆိုတာပြောနေစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး။ အမေရိကန်အလုပ်သမားဦးစီးဌာနက လေ့လာတွေ့ရှိချက် အပေါ်ကျွန်တော့်အနေနဲ့ထပ်မံဖြည့်စွက်ချင်တဲ့ HR တစ်ယောက်အတွက် အရည်အချင်းတွေကို ဖော်ပြပေးပါရစေ။
တကယ်တော့ HR တစ်ယောက်မှာရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေထဲမှာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ အတော်များများရှိပြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ လိုအပ်နေတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကိုသာ ထပ်မံဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ထိရောက်မြန်ဆန်တဲ့ HR Professional ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ပိုမိုပြည့်စုံမှုရှိရှိရပ်တည်သွားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း လေ့လာမိသမျှတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 2:05 AM